Yaa mas’uul ka ah is af-garan waaga maamulka Puntland iyo shacabka Boosaaso? - Caasimada Online
Home Warar Yaa mas’uul ka ah is af-garan waaga maamulka Puntland iyo shacabka Boosaaso?
Yaa mas’uul ka ah is af-garan waaga maamulka Puntland iyo shacabka Boosaaso?
Saxaafadda (mediayaha) oo ka soo tebieye dekedaha laga eryay DP workd ee Cadan iyo Jabuuti iyo Berbera oo xaalkeeda taagan yahay ayaa xaalada sii iftiimiyey.
Mudada 30 sano ah oo aad u badan iyo howsha la sheegay naqshada ay ka fulinayaan oo aan isu-dhigmin.
Dowladda Puntland oo uu ka maqan dareenka culayska saxaafadda ku leedahay qancinta iyo jiheynta bulshadda taaso aan lahayn wargeys ama idaacad afkeeda ku hadla, TVga Puntland mooye.
Qoraalkan waxa uu kusoo baxay Wargayska Kaaha-Bari